माधव क. गल्ती नगर्नुस्, तपाईलाई इतिहासले सलाम ठोकेको हेर्ने मन छ - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
गृहपृष्ठ युथ आइडल
मङ्लबार, बैशाख १६, २०७७ (April 28, 2020, 2:48 pm) मा प्रकाशित
मङ्लबार, बैशाख १६, २०७७, ।
केहि मनुवाहरु भन्न थालेछन किन माधव नेपालले कम्रेड केपि ओलीलाई जोगाइदिनु पर्ने ? कठै धतुरेहरुको मानसिकता बरु हाम्रो चाहाना हो, उनी प्रचण्डको घोडा नबनुन ।
मलाई त इतिहासले तपाईलाई सलाम ठोकेको हेर्ने मन छ। अब तपाईको बिचार के छ ? त्यो तपाईंलाई थाहा होला तर एउटा कार्यकर्ताले चिन्ता प्रकट गर्नु शायद नराम्रो नहोला भन्ने मेरो बुझाई हो हुन सक्छ मेरो बुझाई कमसल वा नम्बर १ त्यो त चेतनामा निर्भर रहने कुरा हो।
नेत्र मैनाली (केन्द्रिय सदस्य, अनेरास्ववियु)
लम्कीचुहा वडा नं १ काे वडा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसबाट टेकराज कठायतको चर्चा